ခန့်စည်သူက ကွယ်လွန်သွားတဲ့ သူမရဲ့ ချစ်သူနဲ့ ရုပ်ချင်းဆင်ကြောင်း ပြောပြခဲ့တဲ့ မမဆောင်း – Suehninsi
ခန့်စည်သူက ကွယ်လွန်သွားတဲ့ သူမရဲ့ ချစ်သူနဲ့ ရုပ်ချင်းဆင်ကြောင်း ပြောပြခဲ့တဲ့ မမဆောင်း
မင်းသမီးချော ဆောင်းအိနြေ္ဒထွန်းကတော့ ပရိတ်သတ်ချစ် မင်းသမီးတစ်ယောက်အနေနဲ့ရပ်တည်နေသူဖြစ်ပြီး မိဘအမွေတွေကို တစ်ယောက်တည်း ရရှိခဲ့တာကြောင့် အလှူအတန်းများကို မပြတ်ပြုလုပ်နေသူပါ။သူမဟာ ”ဆောင်းအိနြေ္ဒထွန်း ရဲ့ချစ်သူဟာ ဆရာဝန်လား? စစ်ဗိုလ်လား? ဘောလုံးဥက္ကဌလား? “ဆိုပြီးတော့ ဝေဖန်မှုတွေက မြင့်တက်လာရာမှ ပရိသတ်စိတ်ဝင်စားခံလာရခြင်းဖြစ်ပါတယ်။
ဒီအင်တာဗျူးလေးမှာလည်း ပရိသတ်အချစ်တော် မမဆောင်းတစ်ယောက် သူမနဲ့ သရုပ်ဆောင်ခန့်စည်သူနဲ့ ခင်မင်ရင်းနှီးပုံကို ပြောပြပြီး သူမရဲ့ ကွန်လွန်သွားတဲ့ချစ်သူက ကိုခန့်နဲ့တောင်ရုပ်ချင်းဆင်တယ်လို့ ပွင့်ပွင့်လင်းလင်း ထုတ်ပြောခဲ့တာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
မမဆောင်းနဲ့ ခန့်စည်သူတို့ဟာ ဆိုရင် အင်မတန်မှခင်မင်ရင်းနှီးကြတဲ့ အနုပညာရှင်မောင်နှမတွေ ဖြစ်ကြပြီး ကိုခန့်က မမဆောင်းကိုတွေ့ရင် စနောက်နေတတ်တယ်လို့ သိရပါတယ်။ လွန်ခဲ့တဲ့ ရက်ပိုင်းအတွင်းမှာလည်း ကိုခန့်က မမဆောင်းကို Facebook ပေါ်မှတစ်ဆင့် စနောက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီး “သီတင်းကျွတ်သွားပြီဆိုတော့ နာမည်သုံးလုံးနဲ့ ဗိုလ်မှူးကို ရွှေးမှာလား၊ နာမည်နှစ်လုံးနဲ့ ပြည်သူ့အချစ်တော်မင်းသားကို ရွေးမှာလား” ဆိုပြီး ကိုခန့်က ရေးသားခဲ့တာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
အခုလိုစနောက်တာကို မမဆောင်းအနေနဲ့ ဘယ်လိုမှ စိတ်ထဲမခံစားရပဲ ကိုယ့်ဆရာသမားတွေက ကိုယ့်ကိုချစ်လို့ခင်လို့စတာဖြစ်လို့ ကံကောင်းတယ်လို့တောင် ယူဆတယ်လို့ ပြောပါတယ်။ကိုခန့်စည်သူနဲ့ မမဆောင်းကြားမှာလည်း အမှတ်တရတွေရှိတယ်လို့ မမဆောင်းက ဆိုပါတယ်။ ဘယ်လိုအမှတ်တရမျိုးလဲ ဆိုတော့ ကွယ်လွန်သွားတဲ့ မမဆောင်းရဲ့ချစ်သူဟာဆိုရင် ကိုခန့်စည်သူနဲ့ ရုပ်ချင်းချွတ်စွပ်တူနေတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ တစ်ခါကဆိုရင် အဲ့ဒီအကြောင်းကို မမဆောင်းက အင်တာဗျူးတစ်ခုမှာ ဖြေမိပြီး မသင့်တော်တဲ့အတွက် အဲ့ဒီအပိုင်းကို ပြန်ဖျက်ခိုင်းခဲ့ပါတယ်။
ကိုခန့်နဲ့တွေ့တဲ့အခါမှာတော့ အဲ့ဒီလိုဖြေထားခဲ့တဲ့အကြောင်း ပြောပြပြီး အဲ့ဒီအင်တာဗျူးကို ကြည့်ကြည့်ဦးလို့ တိုက်တွန်းပြီးခါမှ ကိုခန့်ကြည့်တဲ့အခါမှာတော့ အဲ့ဒီအပိုင်းကို မမဆောင်းရဲ့တောင်းဆိုမှုအရ ပြန်ဖျက်လိုက်ပြီဖြစ်တဲ့အတွက် အလွဲတွေဖြစ်ခဲ့ရတယ်လို့ သူမရဲ့ စိတ်ဂနာမငြိမ်မှုကြောင့် ဖြစ်ရတဲ့ သူမနဲ့ကိုခန့်ကြားက အမှတ်တရအလွဲလေးတွေကို ရယ်မောပြောပြခဲ့ပါတယ်။
မမဆောင်းအနေနဲ့ အိမ်မှာလည်း အငယ်ဆုံးဖြစ်တဲ့အတွက် စိတ်ဆိုးစ်တ်ကောက်ဆိုတာမျိုးဖြစ်လေ့ဖြစ်ထသိပ်မရှိပဲ ကိုယ်က စိတ်ကောက်နေပြီဆိုရင်တောင် အခြားသူတွေက မသိကြဘူးလို့ ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်ပဲ ရင်ဖွင့်ပြောပြခဲ့ပါတယ်။ “အဓိကက ကိုယ့်ကို အကုန်လုံးက ရိုးသားလို့ ချစ်ကြခင်ကြတာ… မမဆောင်းကို ရိုးသားလို့ အ လို့ စချင်ကြတယ်… မင်းသားကိုရန်အောင်တို့ဆို စချင်ကြတယ်… သူလည်း ကိုခန့်စနောက်ပြီးတင်ထားတဲ့ ပို့စ်အောက်မှာဝင်ရေးထားတယ်… ကိုယ်တောင် မနက်က အဲ့မှာဝင်ရေးထားတယ်… အကိုတို့နှစ်ယောက် သမီးကို မစကြနဲ့လို့ ရူးသွားမယ်လို့တောင် စလိုက်သေးတယ်”
ပရိသတ်ကြီးတို့ရေ မမဆောင်းကတော့ လက်ရှိအချိန်မှာ ပရဟိတအသင်းတွေကို ကူညီလှူဒါန်းပေးဖြစ်နေပြီး အနုပညာမောင်နှမတွေဖွဲ့စည်းထားတဲ့ မေတ္တာအသင်းကို ယုံကြည်စိတ်ချရတဲ့အတွက် ပုံမှန်လှူပေးဖြစ်တယ်လို့ ဝေမျှလာပါတယ်။ မမဆောင်းက မေတ္တာအသင်း၊ နာရေးကူညီမှုအသင်း စတဲ့အသင်းအဖွဲ့တွေဟာ ပြည်သူတွေထံကို အတိအကျရောက်ရှိအောင် ကူညီလှူဒါန်းပေးနေတဲ့ အဖွဲ့အစည်းတွေဖြစ်လို့ ကုသိုလ်အပြည့်ရအောင် အဲ့ဒီအဖွဲ့တွေကို ပါဝင်လှူဒါန်းပေးကြပါအုံးလို့ ပရိသတ်အားလုံးကို နှိုးဆော်တိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်။ ပရိသတ်ကြီးတို့လည်း ဒီကာလမှာ အရာရာကို သတိနဲ့ ဆင်ဆင်ခြင်ခြင် သွားလာနေထိုင်ပြီး ကျန်းမာပျော်ရွှင်ကြပါစေလို့ ဆုတောင်းပေးလိုက်ရပါတယ်။
မငျးသမီးခြော ဆောငျးအိန်ဒွထှေနျးကတော့ ပရိတျသတျခဈြ မငျးသမီးတဈယောကျအနနေဲ့ရပျတညျနသေူဖွဈပွီး မိဘအမှတှေကေို တဈယောကျတညျး ရရှိခဲ့တာကွောငျ့ အလှူအတနျးမြားကို မပွတျပွုလုပျနသေူပါ။သူမဟာ ”ဆောငျးအိန်ဒွထှေနျး ရဲ့ခဈြသူဟာ ဆရာဝနျလား? စဈဗိုလျလား? ဘောလုံးဥက်ကဌလား? “ဆိုပွီးတော့ ဝဖေနျမှုတှကေ မွငျ့တကျလာရာမှ ပရိသတျစိတျဝငျစားခံလာရခွငျးဖွဈပါတယျ။
ဒီအငျတာဗြူးလေးမှာလညျး ပရိသတျအခဈြတျော မမဆောငျးတဈယောကျ သူမနဲ့ သရုပျဆောငျခနျ့စညျသူနဲ့ ခငျမငျရငျးနှီးပုံကို ပွောပွပွီး သူမရဲ့ ကှနျလှနျသှားတဲ့ခဈြသူက ကိုခနျ့နဲ့တောငျရုပျခငျြးဆငျတယျလို့ ပှငျ့ပှငျ့လငျးလငျး ထုတျပွောခဲ့တာပဲ ဖွဈပါတယျ။
မမဆောငျးနဲ့ ခနျ့စညျသူတို့ဟာ ဆိုရငျ အငျမတနျမှခငျမငျရငျးနှီးကွတဲ့ အနုပညာရှငျမောငျနှမတှေ ဖွဈကွပွီး ကိုခနျ့က မမဆောငျးကိုတှရေ့ငျ စနောကျနတေတျတယျလို့ သိရပါတယျ။ လှနျခဲ့တဲ့ ရကျပိုငျးအတှငျးမှာလညျး ကိုခနျ့က မမဆောငျးကို Facebook ပျေါမှတဈဆငျ့ စနောကျခဲ့တာဖွဈပွီး “သီတငျးကြှတျသှားပွီဆိုတော့ နာမညျသုံးလုံးနဲ့ ဗိုလျမှူးကို ရှေးမှာလား၊ နာမညျနှဈလုံးနဲ့ ပွညျသူ့အခဈြတျောမငျးသားကို ရှေးမှာလား” ဆိုပွီး ကိုခနျ့က ရေးသားခဲ့တာပဲ ဖွဈပါတယျ။
အခုလိုစနောကျတာကို မမဆောငျးအနနေဲ့ ဘယျလိုမှ စိတျထဲမခံစားရပဲ ကိုယျ့ဆရာသမားတှကေ ကိုယျ့ကိုခဈြလို့ခငျလို့စတာဖွဈလို့ ကံကောငျးတယျလို့တောငျ ယူဆတယျလို့ ပွောပါတယျ။ကိုခနျ့စညျသူနဲ့ မမဆောငျးကွားမှာလညျး အမှတျတရတှရှေိတယျလို့ မမဆောငျးက ဆိုပါတယျ။ ဘယျလိုအမှတျတရမြိုးလဲ ဆိုတော့ ကှယျလှနျသှားတဲ့ မမဆောငျးရဲ့ခဈြသူဟာဆိုရငျ ကိုခနျ့စညျသူနဲ့ ရုပျခငျြးခြှတျစှပျတူနတောပဲ ဖွဈပါတယျ။ တဈခါကဆိုရငျ အဲ့ဒီအကွောငျးကို မမဆောငျးက အငျတာဗြူးတဈခုမှာ ဖွမေိပွီး မသငျ့တျောတဲ့အတှကျ အဲ့ဒီအပိုငျးကို ပွနျဖကျြခိုငျးခဲ့ပါတယျ။
ကိုခနျ့နဲ့တှတေဲ့အခါမှာတော့ အဲ့ဒီလိုဖွထေားခဲ့တဲ့အကွောငျး ပွောပွပွီး အဲ့ဒီအငျတာဗြူးကို ကွညျ့ကွညျ့ဦးလို့ တိုကျတှနျးပွီးခါမှ ကိုခနျ့ကွညျ့တဲ့အခါမှာတော့ အဲ့ဒီအပိုငျးကို မမဆောငျးရဲ့တောငျးဆိုမှုအရ ပွနျဖကျြလိုကျပွီဖွဈတဲ့အတှကျ အလှဲတှဖွေဈခဲ့ရတယျလို့ သူမရဲ့ စိတျဂနာမငွိမျမှုကွောငျ့ ဖွဈရတဲ့ သူမနဲ့ကိုခနျ့ကွားက အမှတျတရအလှဲလေးတှကေို ရယျမောပွောပွခဲ့ပါတယျ။
မမဆောငျးအနနေဲ့ အိမျမှာလညျး အငယျဆုံးဖွဈတဲ့အတှကျ စိတျဆိုးဈတျကောကျဆိုတာမြိုးဖွဈလဖွေ့ဈထသိပျမရှိပဲ ကိုယျက စိတျကောကျနပွေီဆိုရငျတောငျ အခွားသူတှကေ မသိကွဘူးလို့ ပြျောပြျောရှငျရှငျပဲ ရငျဖှငျ့ပွောပွခဲ့ပါတယျ။ “အဓိကက ကိုယျ့ကို အကုနျလုံးက ရိုးသားလို့ ခဈြကွခငျကွတာ… မမဆောငျးကို ရိုးသားလို့ အ လို့ စခငျြကွတယျ… မငျးသားကိုရနျအောငျတို့ဆို စခငျြကွတယျ… သူလညျး ကိုခနျ့စနောကျပွီးတငျထားတဲ့ ပို့ဈအောကျမှာဝငျရေးထားတယျ… ကိုယျတောငျ မနကျက အဲ့မှာဝငျရေးထားတယျ… အကိုတို့နှဈယောကျ သမီးကို မစကွနဲ့လို့ ရူးသှားမယျလို့တောငျ စလိုကျသေးတယျ”
ပရိသတျကွီးတို့ရေ မမဆောငျးကတော့ လကျရှိအခြိနျမှာ ပရဟိတအသငျးတှကေို ကူညီလှူဒါနျးပေးဖွဈနပွေီး အနုပညာမောငျနှမတှဖှေဲ့စညျးထားတဲ့ မတ်ေတာအသငျးကို ယုံကွညျစိတျခရြတဲ့အတှကျ ပုံမှနျလှူပေးဖွဈတယျလို့ ဝမြှေလာပါတယျ။ မမဆောငျးက မတ်ေတာအသငျး၊ နာရေးကူညီမှုအသငျး စတဲ့အသငျးအဖှဲ့တှဟော ပွညျသူတှထေံကို အတိအကရြောကျရှိအောငျ ကူညီလှူဒါနျးပေးနတေဲ့ အဖှဲ့အစညျးတှဖွေဈလို့ ကုသိုလျအပွညျ့ရအောငျ အဲ့ဒီအဖှဲ့တှကေို ပါဝငျလှူဒါနျးပေးကွပါအုံးလို့ ပရိသတျအားလုံးကို နှိုးဆျောတိုကျတှနျးလိုကျပါတယျ။ ပရိသတျကွီးတို့လညျး ဒီကာလမှာ အရာရာကို သတိနဲ့ ဆငျဆငျခွငျခွငျ သှားလာနထေိုငျပွီး ကနျြးမာပြျောရှငျကွပါစလေို့ ဆုတောငျးပေးလိုကျရပါတယျ။